TV Shows – Alpha Premium
Theodosia (2022) (တိုက်ရိုက်ကြည့်ချင်သူများလဲ app ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ဇာတျလမျးပုံစံထူးထူးခွားခွားလေးနဲ့ "Theodosia" ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးတှဲလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ သီအိုဒိုဇီးယားဆိုတဲ့ကောငျမလေးဟာစူစမျးရှာဖှရှောတာစှနျ့စားရတာကို ကွိုကျတဲ့ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးတဈယောကျဖွဈပါတယျ စူးစမျးရှာဖှတေယျဆိုတဲ့နရောမှာရှေးဟောငျးအီဂဈြနဲ့ ပတျသကျတာတှကေိုအထူးစိတျဝငျစားတဲ့သူပါ သူ့မိဘတှကေလညျးရှေးဟောငျးပစ်စညျးတူးဖျောရေးလုပျငနျးလုပျကိုငျသူတှဖွေဈတဲ့အတှကျ သီအိုအတှကျလညျးအီဂဈြနဲ့ပတျသကျရငျမသိတာမရှိသလောကျပါပဲ တဈရကျမှာတော့သီအိုဒိုဇီးယားတဈယောကျ မောငျဖွဈသူဟငျနရီနဲ့အီဂဈြတျောဝငျဂူသင်ျခြိုငျးကိုလိုကျရှာရငျးမထငျမှတျဘဲ ဟောရကျဈမကျြလုံးလို့ချေါတဲ့ အဆောငျလိုမြိုးရှေးဟောငျးပစ်စညျးတဈခုကိုတှခေဲ့ပါတယျ အဆောငျလကျထဲရောကျတဲ့နကေ့တညျးက သီအိုတဈယောကျထူးဆနျးတဲ့ အိပျမကျတှအေမွငျတှနေဲ့ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှမှောပါရှိနတေဲ့ကြိနျစာတှကေိုမွငျနိုငျစှမျးရရှိလာပါတော့တယျ သီအိုဒိုဇီးယားရှာတှခေဲ့တဲ့ဟောရကျဈမကျြလုံးဆိုတဲ့ပစ်စညျးမှာတကယျပဲဒဏ်ဍာရီထဲကလိုအစှမျးတှရှေိနတောလား ကြိနျစာသငျ့နတေဲ့ဒီပစ်စညျးတှကေနသေီအိုတဈယောကျသူ့မိသားစုကိုဘယျလိုကယျတငျသှားမလဲဆိုတာတော့ ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဇာတ်လမ်းပုံစံထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့ "Theodosia" ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ သီအိုဒိုဇီးယားဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာစူစမ်းရှာဖွေရှာတာစွန့်စားရတာကို ကြိုက်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် စူးစမ်းရှာဖွေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှေးဟောင်းအီဂျစ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူပါ သူ့မိဘတွေကလည်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သီအိုအတွက်လည်းအီဂျစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်မသိတာမရှိသလောက်ပါပဲ တစ်ရက်မှာတော့သီအိုဒိုဇီးယားတစ်ယောက် မောင်ဖြစ်သူဟင်နရီနဲ့အီဂျစ်တော်ဝင်ဂူသင်္ချိုင်းကိုလိုက်ရှာရင်းမထင်မှတ်ဘဲ ဟောရက်စ်မျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့ အဆောင်လိုမျိုးရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် အဆောင်လက်ထဲရောက်တဲ့နေ့ကတည်းက သီအိုတစ်ယောက်ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တွေအမြင်တွေနဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေမှာပါရှိနေတဲ့ကျိန်စာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရရှိလာပါတော့တယ် သီအိုဒိုဇီးယားရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟောရက်စ်မျက်လုံးဆိုတဲ့ပစ္စည်းမှာတကယ်ပဲဒဏ္ဍာရီထဲကလိုအစွမ်းတွေရှိနေတာလား ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနေသီအိုတစ်ယောက်သူ့မိသားစုကိုဘယ်လိုကယ်တင်သွားမလဲဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 700MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့်ဒေါင်းနည်း (အစိမ်းပြထားတာကိုကလစ်ပါ) GDtotဒေါငျးနညျး (uc browser ကိုသုံးရငျပိုကောငျးပါတယျ) Mega.nz Link ဒေါငျးနညျး Gdrive Linkဒေါငျးနညျး ========================================================================================= Episode 1 (700MB) 1080p Alphadrive / Gdrive Episode2(700MB) ...
The Endgame Season 1 Complete ##unicode အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ နောကျဆုံးအသဈထှကျseriesတော့ ဘဏျဓားပွတိုကျမှုအကွောငျးကို အခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ seriesဖွဈပွီး အတျောစိတျဝငျစားဖို့လညျးကောငျး၊သညျးထိတျရငျဖိုလညျးဖွဈမယျ့ ဇာတျလမျးတှဲကောငျးပဲဖွဈလာမှာပါ ဒီထဲမှာတော့ ဘဏျတဈခုတညျးတောငျမဟုတျဘူး ဘဏျခုနှဈခုတောငျတနျးပွီးတော့ဝငျစီးပဈလိုကျပါတယျ ဒီလိုဘဏျဝငျစီးမှုတှရေဲ့နောကျကှယျမှာတော့ လကျနကျမှောငျခိုဒုစရိုကျဂိုဏျးခေါငျးဆောငျ ထကျမွကျတဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျရှိနပေါတယျ ထိုအမြိူးသမီးရဲ့ပဟဠေိဆနျတဲ့ဘဝအကွောငျးကိုစောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ FBIတှကေ သူ့ကိုဖမျးဆီးထားတဲ့အခြိနျမှာပဲ သူက ဘဏျခုနှဈခုကိုဝငျစီးခိုငျးထားခဲ့ပါတယျ ငှကွေောငျ့မဟုတျဘဲ ဘာအကွောငျးရငျးကွောငျ့ ဒီဘဏျတှကေို သူဝငျစီးခဲ့လဲဆိုတာ seriesထဲမှာ တဈပိုငျးတဈပိုငျးစိတျလှုပျရှားမှုအပွညျ့နဲ့စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ တဈပတျကို တဈပိုငျးနဲ့၆ပိုငျးထုတျလှငျ့သှားမှာဖွဈလို့စောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်seriesတော့ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုအကြောင်းကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ seriesဖြစ်ပြီး အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်း၊သည်းထိတ်ရင်ဖိုလည်းဖြစ်မယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းပဲဖြစ်လာမှာပါ ဒီထဲမှာတော့ ဘဏ်တစ်ခုတည်းတောင်မဟုတ်ဘူး ဘဏ်ခုနှစ်ခုတောင်တန်းပြီးတော့ဝင်စီးပစ်လိုက်ပါတယ် ဒီလိုဘဏ်ဝင်စီးမှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ လက်နက်မှောင်ခိုဒုစရိုက်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ် ထိုအမျိူးသမီးရဲ့ပဟေဠိဆန်တဲ့ဘဝအကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ FBIတွေက သူ့ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အချိန်မှာပဲ သူက ဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုဝင်စီးခိုင်းထားခဲ့ပါတယ် ငွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဘာအကြောင်းရင်းကြောင့် ဒီဘဏ်တွေကို သူဝင်စီးခဲ့လဲဆိုတာ seriesထဲမှာ တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တစ်ပတ်ကို တစ်ပိုင်းနဲ့၆ပိုင်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 400MB,800MB (per episodes) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded by Arrow ===================================================================================================================================== Episode 1 (400MB/800MB) 720p/1080p ...
The Endgame Season 1 Complete
Supernatural Academy Season 1 Complete (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနကွေညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့စာရေးဆရာမ Jaymin Eve ရဲ့အရောငျးရဆုံးစာအုပျတှထေဲကတဈအုပျဖွဈတဲ့ "Supernatural Academy" ဆိုတဲ့စာအုပျလေးကိုအခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ animation ကာတှနျးကားလေးတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးလေးကတော့ဂကျြဆာနဲ့မီရှာဟာအမွှာညီအဈမနှဈယောကျဖွဈပမေယျ့ငယျငယျတညျးက မိဘတှကေ သူတို့နှဈယောကျကိုတဈကှဲတဈပွားစီပြိုးထောငျခဲ့ပါတယျ မီရှာကတော့လူသားတှရေဲ့ကမ်ဘာမှာခြို့ခြို့တဲ့တဲ့ကွီးပွငျးခဲ့ရပမေယျ့ ဂကျြဆာကတော့ စှမျးအားရှငျကြောငျးမှာပညာသငျရငျးဘဝကိုပွညျ့ပွညျ့စုံစုံနဲ့ဖွတျသနျးခဲ့ရပါတယျ တဈနမှေ့ာတော့သူတို့ရဲ့မိဘတှဟောသူတို့နှဈယောကျကိုတှပေ့ေးပွီး သူတို့ညီအဈမနှဈယောကျကိုခှဲထားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးဟာမှေးရာပါနဂါးအမှတျအသားပါလို့ဖွဈကွောငျးနှဈယောကျအတူရှိတဲ့အခါ အမှတျအသားကပိုပွီးအငျအားကွီးလာကွောငျးအသိပေးခဲ့ပါတယျ သူတို့စှမျးအားရှငျဘိုးဘေးတှအေခြိနျတုနျးကနဂါးဘုရငျဆိုတာဟာအရမျးကိုရကျစကျပွီး အငျအားကွီးကွောကျစရာကောငျးတဲ့သတ်တဝါကွီးဖွဈပါတယျ နဂါးဘုရငျကိုနှိမျနငျးလိုကျကွပမေယျ့ တဈနကေ့ရြငျနဂါးအမှတျပါတဲ့သူတဈယောကျဟာသူ့ကိုပွနျပွီးနိုးထလာအောငျကွံစညျမယျဆိုတဲ့ ရှဖွေ့ဈဟောကွောငျ့နဂါးအမှတျပါတဲ့သူတှကေို ကိုအီစတာဆိုတဲ့အကဉျြးစခနျးလိုနရောမြိုးကိုပို့ကွပါတယျ အဲ့တာကွောငျ့ဂကျြဆာနဲ့မီရှာတို့အမွှာညီအဈမနှဈယောကျကိုခှဲထားခဲ့ရတာပါ ဒီအဖွဈမှနျကိုသိသှားတဲ့အခါမှာ ဂကျြဆာတို့ညီအဈမနှဈယောကျသူတို့ရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြကိုမသိအောငျဘယျလိုနထေိုငျသှားကွမလဲ မှေးရာပါနဂါးအမှတျအသားပါသူတှဟော တကယျပဲအန်တရာယျမြားတာလားဆိုတာကိုစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမ Jaymin Eve ရဲ့အရောင်းရဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ "Supernatural Academy" ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ animation ကာတွန်းကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဂျက်ဆာနဲ့မီရှာဟာအမြွှာညီအစ်မနှစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ငယ်ငယ်တည်းက မိဘတွေက သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတစ်ကွဲတစ်ပြားစီပျိုးထောင်ခဲ့ပါတယ် မီရှာကတော့လူသားတွေရဲ့ကမ္ဘာမှာချို့ချို့တဲ့တဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရပေမယ့် ဂျက်ဆာကတော့ စွမ်းအားရှင်ကျောင်းမှာပညာသင်ရင်းဘဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပေးပြီး သူတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကိုခွဲထားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဟာမွေးရာပါနဂါးအမှတ်အသားပါလို့ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ယောက်အတူရှိတဲ့အခါ အမှတ်အသားကပိုပြီးအင်အားကြီးလာကြောင်းအသိပေးခဲ့ပါတယ် သူတို့စွမ်းအားရှင်ဘိုးဘေးတွေအချိန်တုန်းကနဂါးဘုရင်ဆိုတာဟာအရမ်းကိုရက်စက်ပြီး အင်အားကြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတ္တဝါကြီးဖြစ်ပါတယ် နဂါးဘုရင်ကိုနှိမ်နင်းလိုက်ကြပေမယ့် တစ်နေ့ကျရင်နဂါးအမှတ်ပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးနိုးထလာအောင်ကြံစည်မယ်ဆိုတဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဟောကြောင့်နဂါးအမှတ်ပါတဲ့သူတွေကို ကိုအီစတာဆိုတဲ့အကျဉ်းစခန်းလိုနေရာမျိုးကိုပို့ကြပါတယ် အဲ့တာကြောင့်ဂျက်ဆာနဲ့မီရှာတို့အမြွှာညီအစ်မနှစ်ယောက်ကိုခွဲထားခဲ့ရတာပါ ဒီအဖြစ်မှန်ကိုသိသွားတဲ့အခါမှာ ဂျက်ဆာတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမသိအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်သွားကြမလဲ မွေးရာပါနဂါးအမှတ်အသားပါသူတွေဟာတကယ်ပဲအန္တရာယ်များတာလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 400MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Animation, Sci-Fi & Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber ...
Supernatural Academy Season 1 Complete